Sidaan hadii aad samaysid Raaxo Waalan ayaa laga helayaa (Sirta dareenka) | shumis.net
Home » galmada » Sidaan hadii aad samaysid Raaxo Waalan ayaa laga helayaa (Sirta dareenka)
shabakada sirhufan waxa ay idiin heysaa qodob sir ah Ceeb ma ah in labada lamaane ay is weydiiyaan qaabka midka kale uu raaxada ku helayo , hadaba hadii aad dooneyso in aad heshaan raaxo macaan habkaan raaca.
Ninyahow ogaaw marka galmada dhamaado haweenka waxay u baahan yihiin hadal macaan una mahad celi , waayo raaxadii hore mid ka mac ayay daremeeysaa oo maqsuud ayay noqoneysa .
Tanina rag badan waa ilaawaan oo durba sariirta dhanka kale uga jeestaan waxana la dhihi karaa ma mudna kuwaas in lala raaxeysto. Hadii aad talo iyo tusaale ama su,aal aad qabto fadlan kala soo xiriir ciwaankeena.
Title: Sidaan hadii aad samaysid Raaxo Waalan ayaa laga helayaa (Sirta dareenka)